Itoobiya: "Ma jirto sabab aan bad la'aan u ahaanno inagoo 100 milyan ah" - Halbeeg News
Itoobiya: “Ma jirto sabab aan bad la’aan u ahaanno inagoo 100 milyan ah”
Addis Ababa (Halbeeg)- Hogaanka Militariga Itoobiya ayaa sheegay in dib loo dhisayo ciidanka badda Itoobiya oo la burburiyay 1996-kii kadib markii ay Eritrea ka go’day dalka Itoobiya sanadkii 1991-kii.
Wixii waqtigaa ka danbeeyay Itoobiya waxa ay noqotay wadan aan heysan bad saldhig u noqota ciidanka badda Itoobiya.
Shalay mid kamid ah hogaanka ciidamada xoogga dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Jeneraal Berahino ayaa warbaahinta Addis Standard u sheegay in ay laga maarmaan tahay in dib loo aasaaso ciidanka badda Itoobiya.
“Waxa aanu la tashanay dalal kale, marka ay timaaddo qaab dhismeedka ciidamadeenna badda, xajmiga iyo dib u howlgelinta” sidaa waxaa yiri Jeneraal Berahino Juula, Abaanduula xigeenka ciidanka xoogga dalka Itoobiya oo la hadlay Addis Standard.
Abaanduulaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dooday in dalal kala duwan oo fara badan ay meelo kala duwan uga yimaadaan si ay u u muujiyaan ama u abuuraan awoodooda dhinaca badda sidaa darteedna aysan jirin sabab ay Itoobiya bad la’aan usii ahaato.
“Waa in aynu muujinnaa saameynteenna badda, dalal kale duwan oo badan baa meelo aad u fog uga imaanaya in ay saameyntooda badda ka muujiyaan, wax aan nahay dal weyn oo ay degan yihiin dad ka badan 100 milyan, mana jirto sabab ay Itoobiya usii ahaato bad la’aan” ayuu ku dooday Jeneraal Berahinu Jula.
Raiisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Juun ku dhawaaqay damaca dalkiisa ee ku aadan ee dib u howlgelinta ciidamada badda Itoobiya.
Ethiopia Airline oo ka degtay magaalada Muqdisho